7 Marka Flea tsara indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Marka Flea tsara indrindra any Eropa
Raiso ny lamasinina mankany amin'ny toerana mety indrindra vaky ny tanàna na miantsena, ny renivohitra tena mahavariana indrindra any Eropa dia manana izany rehetra izany. Ny tsenan'ny felam-bolo dia toerana misy ny Retro sy maoderina, ankehitriny sy tantara, miaraha mivory, izay miseho zavatra lehibe, ary ny antsika 7 tsena parasy tsara indrindra any Eropa no ohatra lavorary.
Raha liana amin'ny fiantsenana ianao, ary indrindra ho an'ny fanangonana vokatra, avy eo ireto 7 tsena parasy tsara indrindra any Eropa dia ho nofinofy. Araho fotsiny ny tsenan'ny parasy farany any Eropa, ary raiso a valizy lehibe!
1. Tsenan'i Flea Munich
Raha mankany Bavaria ianao amin'ny Fialantsasatra eropeana amin'ny lohataona, ary mitady zava-boaloboka vaovao, dia ho tianao ny tsenan'ny parasy goavana ao Munich. Ity tsena parasy mahatalanjona ity dia manamarika ny fetin'ny lohataona ary atao indray mandeha isan-taona.
Hisy ny farany 2000 mpivarotra, miaraka amina vanim-potoana Vintage, toy ny kitapo Louis Vuitton amin'ny vidiny mahatsikaiky. Ary noho izany, azonao atao angamba ny manazava fa ny sabotsy ho an'ny tsena parasy Riesen-Flohmarkt Theresienwiese ao Munich. Ankoatry ny, tonga miaraka amin'ny lisitra fiantsenana mazava, ary mankanesa any aloha araka izay tratranao. Misokatra ny varavarana amin'ny 4 aho, ary tsy ho ianao irery no vorona voalohany!
2. Tsena parasy Amsterdam
Raha tsy fantatrao, I Amsterdam dia tanàna manana tantaram-barotra manan-karena. Ary noho izany, tsy mahagaga raha ny iray amin'ireo tsena parasy tsara indrindra any Eropa dia any Amsterdam. Indray mandeha isan-taona, ireo arabe mahafinaritra any Amsterdam, hivadika tsena malalaka, izay ahafahanao miantsena sy mitafy ny atmosfera mahavariana amin'ny iray ny tanàna lehibe indrindra any Eropa.
Indray mandeha isan-taona, ho fankalazana amin'ny Andron'ny Mpanjaka, ireo lakandrano sy zanan'i Amsterdam dia miova ho tsena parasy lehibe. Vintage vintage, kanto, fitaovana, ary harena hafa ankoatr'izay miandry anao eto amin'ity tsenan'ny parasy mahatalanjona ity.
Rahoviana? 6 AM 8 amin'ny 27 aprily hariva.
Ny tsena parasy lehibe indrindra sy malaza indrindra any Frantsa, ny tsenan'ny parasy Grande Braderie de Lille no hampiantrano 10,000 mpivarotra.
Ny tsenan'ny parasy Lille no hetsika lehibe indrindra tamin'ny taona ary amin'ny faran'ny herinandro voalohany amin'ny volana septambra. Raha miditra amin'ny fiotazam-boaloboka ianao, ary zavatra Retro, dia tsara kokoa raha te handahatra tapakila mankany Lille ianao amin'ny volana septambra 4faha– 5faha, ho an'ny fihoaram-pefy taloha.
Voalaza fa, fa hanakaiky anao izy io 40 ora fotsiny handehanana hamakivaky ireo toerana rehetra, ary tsy misy fijanonana sy fiantsenana izany.
Andian-teny manampy vitsivitsy hotehirizina & mianatra:
“Inona ny vidinao tsara indrindra?”- Inona ny vidinao tsara indrindra?
"Coupons la poire en Deux" - Andao hifankahita eo afovoany / hanao bargain
"Miady varotra!”- Deal!
Ahoana no ahatongavana any? Makà ora iray Fitsangatsanganana an-dalamby TGV avy any Paris.
4. Tsenan'ny lalana Portobello any London
Ny tsena parasy tsara indrindra any Angletera dia miseho isan'andro ao amin'ny tsenan'i Portobello any Londres. Fashion, Antiques, sakafo, ary ny harena faharoa dia miandry anao isan'andro isan'andro amin'ny herinandro, fa miomàna amin'ny fitomboan'ny angovo sy ny lokon'ny sabotsy.
Noho izany, aorian'ny andro fiantsenana fahagola, afaka mandray legioma matsiro ianao, fromazy, ary fitsaboana hafa hisakafo atoandro haingana alohan'ny hanohizanao ny fikatsahanao fotoana amin'ny tsenan-damaody any Westway. Ny fitsidihana ny tsenan'i Portobello Road dia iray amin'ireo zavatra tsara indrindra hatao any Londres, ary tokony hanokana andro iray manontolo ho an'ity tsena parasy ity sy ny mari-pahaizana London.
5. Tsena Paris Flea
Rehefa mieritreritra an'i Paris isika, maka sary avy hatrany ny rivotra iainana isika. Special, zava-miafina, fahiny, mpanjaka tonga ao an-tsaina miaraka amin'i Paris daholo, ary ho an'ny tsenan'ny parasy mahavariana.
Ny tsenan'ny parasy Paris dia iray amin'ireo tsena parasy tsara indrindra any Eropa noho ny harena tsy fahita afeniny. Zavakanto afrikanina, ravina haingon-trano, ary ny akanjo dia zavatra vitsivitsy ihany no ho hitanao amin'ity tsena parasy goavana ity.
Raha maniry hitondra sombiny kely any Paris ianao, avy eo ny tsena parasy any Paris no toerana hiantsenana. Manomboka ny fikarohanao ianao Làlana Rosiers, ny arabe, ary midina hidina any amin'ny tsena misaraka.
Ahoana no ahatongavana any? Raiso ny metro, mankanesa any Porte de Clignancourt amin'ny zotra 4, ary araho ny vahoaka mankany amin'ny overpass beton lehibe.
6. Tsenan'ny lalao baolina any Bruxelles
Ny tsena parasy hany misokatra 365 andro isan-taona, ny tsenan'ny Lalao Ball any Bruxelles, no lehibe indrindra ihany koa any Belzika.
Ao afovoan'ny distrikan'i Marolles, hahita rakitsoratra fahirano ianao, ary boky tsy fahita firy napetraka teo ambonin'ireo lamba firakotra. Amin'ny arabe akaiky, ho hitanao ny fivarotana faharoa sy fahagola.
Rahoviana? Ny fotoana tsara indrindra handehanana mitady harena dia amin'ny alakamisy sy zoma.
Aiza? Place du Jeu de Balle Bruxelles
Misy tsena parasy maromaro any Milan, ary tsy mahagaga izany satria izy no renivohitry ny lamaody manerantany. Ny Mercatone dell'Antiquariato no tsena parasy lehibe indrindra any Milan ary atao ny alahady farany isam-bolana. Hisy 380 fiorenan'ny fanaka fahagola sy ny fitafiana taloha, miandry anao.
Na izany aza, ny tsena parasy hipopotama any Milan dia ny East Market. Raha mitady sanganasa azo angonina ianao na zava-kanto maoderina dia ho raiki-pitia amin'ny tsena parasy Atsinanana ianao. afa-tsy, afaka maka sakafo atoandro na labiera amin'ny setan'i DJ ianao, mandritra ny mandehandeha eny amin'ny tsena mahafinaritra ianao. Raha vao miditra an-tsehatra ianao, tsy te handao an'ity mihitsy ianao Retro & fety antitra.
Aiza? Amin'ny alàlan'ny Mecenate, 84
Rahoviana? Isaky ny alahady
Ahoana ny fomba hahatongavana any East Market any Milan? Raiso ny tsipika metro M2
Eoropa dia fampifangaroan'ny Retro sy maoderina, izay miaina amin'ny tsena parasy mahavariana indrindra. Ny dia mankany Eropa dia tsy ho vita raha tsy mandany andro amin'ny iray amin'ireo tsara indrindra 7 tsena parasy any Eropa. Ary, mody tsy misy farafaharatsiny 1 ny tapa-boaloboka dia toy ny tsy mbola nitsidihanao an'i Eropa mihitsy.
eto amin'ny Save A Train, Faly izahay manampy anao handamina ny dianao mankany amin'ireto 7 tsena parasy tsara indrindra any Eoropa lamasinina.
Te hampiditra ny bilaoginay "7 Flea Markets tsara indrindra any Eropa" amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-flea-markets-europe%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
bestmarketseurope Biggestfleamarketeurope Europefleamarkets Europeshopping fleamarket fiantsenana Train Travel